C/llaahi Wehliye oo weerar afka ku qaaday Xukuumaddii uu ka tirsanaa - Jowhar Somali news Leader
Home News C/llaahi Wehliye oo weerar afka ku qaaday Xukuumaddii uu ka tirsanaa
C/llaahi Wehliye oo weerar afka ku qaaday Xukuumaddii uu ka tirsanaa
C/llaahi Faarax Wehliye oo ahaa Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug, ahaana Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrmaha Gudaha ayaa weerar afka ah ku qaaday Siyaasada ay Xukuumadda ku wajaheyso doorashada Galmudug.
Waxaa uu sheegay in Villa Soomaaliya ay faragelin toos ah ku heyso dhismaha maamulka Galmudug, isagoo tilmaamay in handadaad lagu hayo Xildhibaanada cusub ee la soo xulay Jimcihii tegay.
Mr Wehliye oo ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulkan ayaa sheegay in xildhibaanada loogu hanjabay in xubinnimada baarlamaanka lagala noqonayo hadii ay xiriir toos ah ama xitaa Sallaaamaan musharixiinta aysan wadan Xukuumada.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in Xukuumaddii uu ka tirsanaa ay ku colaadisay dadaaladii uu ka sameeyay Galmudug.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrmaha Gudaha & Dib-u-heshiisiinta Somaliya, Cabdullaahi Wehliye Faarax oo galaangal muuqdo ku lahaa dib u heshiisiintii Villa Somalia iyo Ahlu Sunada Galmudug ayaa ku baaqay in la joojiyo fara-gelinta lagu hayo dhismaha Galmudug.
Siyaasiyiin badan iyo Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hore Xukuumada Soomaaliya ugu eedeeyay iney fara gelin toos ah ku heyso dhismaha Galmudug, iyadoo awoodeeda isugu geyneysa sidii ay halkaasi uga keeni leheyd natiijo ka qoslisa.